हङहङविरूद्ध ब्याटिङ शुरु गरेको नेपालको खराब प्रदर्शन ! - हङहङविरूद्ध ब्याटिङ शुरु गरेको नेपालको खराब प्रदर्शन !
हङहङविरूद्ध ब्याटिङ शुरु गरेको नेपालको खराब प्रदर्शन !
२०७५, १९ भदौ, 03:07:41 AM
मलेसिया । एसिया कप छनौट क्रिकेटको निर्णायक खेलमा नेपालले खराब शुरुवात गरेको छ । टस जितेर व्याटिंग शुरु गरेको नेपालले ८ ओभरमा २३ रन जोड्दा २ विकेट गुमाएको छ ।
निकै राम्रो रनरेट चाहिएको अवस्थामा नेपालले झण्डै ३ को रनरेटमा शुन्यमा सुवास खकुरेल र १४ रनमा कप्तान पारस खड्कालाई गुमाएको छ । नेपालले कम्तीमा पनि ३ सय रन बनाउनुपर्ने अवस्थामा खराब शुरुवात गरेको छ । अर्को खेलमा ओमानविरुद्ध युएई र मलेसियाविरुद्ध सिंगापुरले पनि खराब शुरुवात गरेका छन ।
आजको खेलमा नेपालले हङकङलाई फराकिलो अन्तरले हराउनुपर्नेछ भने युएई ओमानसँग हार्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा युएई र नेपालको समान ६ अंक हुनेछ । तर नेपालको रनरेट युएईको भन्दा राम्रो हुनुपर्नेछ । अनि नेपालले यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको ओमानसँग फाइनल खेल्न पाउनेछ । ओमानको भने अहिले नै ७ अंक छ ।